amazon kindle fire hd 8.9 'inotorwa ikaparadzaniswa: yakawanda samsung mukati
Kuru Nhau & Ongororo Amazon Kindle Fire HD 8.9 'inotorwa ichiparadzaniswa: yakawanda Samsung mukati
Iyo Kindle Fire HD 8.9 'ichangobuda, uye zvakasikwa, izvi zvinoreva chinhu chimwe - inguva & maapos kuti itorerwe! Iri basa rakakosha rakaitwa nePowerbookMedic, avo vakaita teardown yakadzikama yepiritsi nyowani, vachiwana zvimwe zvinonakidza munzira.
Chekutanga pane zvese, izvo & apos; zvakaratidzwa kuti nhamba yakanaka yezvinhu mukati inogadzirwa neSamsung ( kwete Sam Sung ). Iyo RAM uye flash memory module, pamwe nebhatiri zvese zvakagadzirwa neSouth Korea behemoth. Chinhu chinonakidza nezve bhatiri rinoratidzika kunge iro & maapuro acho ari maviri dhizaini-bhatiri dhizaini, ine maviri maseru akapatsanurwa, akabatana kuburikidza nebhatiri controller bhodhi Sezvineiwo, mhando yakadaro yekuita haisi & apos; haina kujairika nhasi. Imwe yedzidziso ndeyekuti & maapos akaitwa nenzira iyi kuchengetedza nzvimbo yakakosha.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo chatinodzidza kubva pane izvi & apos; kubvisa 'ndechekuti iyo 8.9' vhezheni ye Kindle Fire HD inofanira kunge iri nyore kugadzirisa, sezvo zvakawanda zvezvinhu zvakasungirirwa kudivi rekuseri, kwete kumberi . Izvi zvinobvumira kubviswa kuri nyore kwechikamu chechidzitiro. Izvo zvinofanirwa kutarisirwa, zvakadaro, kuti iyo LCD uye digitizer zvakasanganiswa pamwechete.
Amazon Kindle Fire HD 8.9 'iri kutorwa ikaparadzaniswa
mabviro: PowerbookMedic kuburikidza Gizmodo
nexus 6p tmobile kuburitsa zuva
samsung galaxy s4 inopisa
Activision ruzivo Kudanwa kweDuty: Nhare & apos; s itsva Zombies modhi, controller rutsigiro
Galaxy S8 uye S8 + pano neapo zvinokuyeuchidza kuti uchenese lensera yekamera kune yakajeka shots
Dzazvino Google Chrome vhezheni yeApple ine mbiri huru kuvandudza
LG G7 ThinQ zuva rekuburitsa rakaziviswa nevatakuri vaviri veUS
Pa = Android 10, YouTube & apos; s Rima tema inogona kusungirwa mukati meesisitimu-yakafara marongero
iPhone & iPad 101: maitiro ekudzima iyo keyboard kudzvanya ruzha